अनमोल र प्रदीप पछि बडीगार्ड सहित देखा परे नायक कुशल, पोेखरा बन्यो रक्ताम्य ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»मनोरञ्जन»अनमोल र प्रदीप पछि बडीगार्ड सहित देखा परे नायक कुशल, पोेखरा बन्यो रक्ताम्य !
अनमोल र प्रदीप पछि बडीगार्ड सहित देखा परे नायक कुशल, पोेखरा बन्यो रक्ताम्य !
By शर्मिला गुरुङ on ८ पुष २०७४, शनिबार १५:५९ मनोरञ्जन
काठमाडौँ, ८ पुस : पछिल्लो समय नायकले बडीगार्ड राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । नायक अनमोल केसीबाट सुरु भएको बडीगार्ड राख्ने प्रचलन प्रदीप खड्काले पनि फलो गरे । यसैबीच बडीगार्ड सहित प्रस्तुत हुने नायकमा थपिएका छन् कुशल थापा ।
झण्डै एक दशक देखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय कुशल शुक्रबार पोखरामा भएको स्ट्रिट कन्सर्टमा ६ जना बडीगार्ड सहित प्रस्तुत भए । सुन्दर नगरी पोखराको सभागृह चोकमा भएको कन्सर्टमा एक हजार बढी दर्शकको सहभागीता रहेको थियो । नजिकिदो “क्रिसमस डे’ र “नयाँ वर्ष”लाई लक्षित गर्दै चलचित्रको प्रसार प्रसारलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले पोखरामा निर्माण यूनिटले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । साँझ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गायक बिनोद ढकालले दर्शकलाई थुप्रै गीत गाएर मनोरञ्जन दिलाए । मोडल समेत रहेकी सोनिकाले विभिन्न आइटम गीतमा नाचेर दर्शकलाई आफूतिर आकर्षित गरिन् । फिल्मका कोरियोग्राफर समेत रहेका रोहन नेपालीले नृत्य प्रस्तुत गरे ।
दर्शक बढ्दै थिए । कतिपय सवारी चालकले मोटरसाइकल र गाडी नै रोकेर सभागृह चोकको कार्यक्रममा उपस्थिती जनाए । उच्च सुरक्षाको बीच स्टेजमा झुल्किए नायक कुशल थापा । उनको साथमा थिए बडीगार्ड । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘ह्याप्पी न्यू इयर’ मा आफूले लभर ब्वाईको भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी गराए। दर्शक समक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेका उनले कुनै फण्डाको लागि बडीगार्ड नराखिएको स्पष्ट पारे। यस अघि निर्माण यूनिटले हेटौडा, नायरायणघट र बुटवलमा कन्सर्टको आयोजना गरेको थियो । स्ट्रिट कन्सर्ट प्रभावकारी भइदिदा चलचित्रको हाइप चुलिएको छ । यद्धपि एक हप्ता पहिले रिलिजमा आएको बलिउड फिल्म ‘टाइगर जिन्दा हे’ का कारण कतै चेपुवामा पर्ने पो कि भन्नेमा निर्माण यूनिट सशंकित छ ।
यसैबीच पोखरामा भएको स्ट्रिट कन्सर्टमा डेभिड खड्काले ग्लास ब्रेकर डान्स गरे । झण्डै सय वटा ट्युवलाईट आफ्नो शरीरमा फुटाए । चुनौतीपूर्ण यो डान्स गरिरहदा उनको शरीर ट्युवलाइटले काटेर रक्ताम्य भयो । जे होस् कार्यक्रमले उपस्थित दर्शकको ध्यान खिच्यो । क्रिसमस डेको दिन निर्माण टोलीले राजधानीमा कन्सर्टको आयोजना गर्दैछ ।
सम्पूर्ण छायांकन अष्ट्रेलियामा गरिएको यो चलचित्र यहि पौष १४ गते रिलिज हुँदैछ । देवकुमार श्रेष्ठ निर्देशित चलचित्रमा कुशल थापा, सन्ध्या केसी र पुकार गौतमको मुख्य भूमिका छ ।